Ogaden News Agency (ONA) – Adoomada Guriga (Home Negros) Malkom X. tilmaantuu ka bixiyay iyo …
Adoomada Guriga (Home Negros) Malkom X. tilmaantuu ka bixiyay iyo …
Itobiya waxay taariikhda iska caabinta shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ku guulaysatay markii ugu horeysay inay ka abuurto Ogadenya qaar la mid ah kuwuu ku tilmaamay inay yihiin Adoonka Guriga (Home Negro) halyaygii madowga Mareykanka u kacay ee la magac baxay Malcolm X. . Maqaalkii Cali Yare ayuu noogu sharxay wuxuu ku sifeeyay Malkom X adoonka guriga, waxayna ahayd sidan; Laba adoon ama la-gumeyste ayaa jirta, adoonka guriga iyo adoonka beerta. Adoonka gurigu ama raranaha gurigu wuxuu ku nool yahay guriga master-kiisa. Waxay xidhaan labis fiican, waxayna cunaan raashin fiican oo ah mida madaxddiisu soo hambayso. Waxay ku nool yihiin qaybta ugu hoosaysa guriga, waxayna master kooda u jecel yihiin si aan masterkoodu naftiisa u jeclayn. Waxay naftooda u huraan gumeystahooda. Haddi masterku yidhaahdo waxan haysanaa guri fiican, adoonkuna wuxuu odhan waxan haysanaa guri fiican. Haddii guriga masterka daab qabsado adoonka gurigu wuxuu u damiyaa si aan masterku gurigiisa u daminayn. Haddii masterku jirado adoonku wuxuu odhan waan jiranahay, masterku wuu jiran yahay odhan maayo. Haddii aad adoonka guriga u timaado ood tidhaahdo ina keen aan baxsanee wuxuu odhan war ma doqon baad tahay maxay tahay aan baxsano ma guri gurigan ka fiican baa jira, xageen dhar dharkan ka fiican ka heli haddii aan baxsado, xageense cunto mida ka fiican ka heli.
Waa xikmad uu fahmi karo un qof arkay oo la dhamay qaar la mid ah kuwaa uu ku tilmaamay Malkom X. Adoomada Guriga (Home Negros). Bal hadda u fiirso nolosha ay ku noolyihiin Cabdi iley iyo kooxdiisa. Masuuliyadooda waxay tahay, habkay u fikirayaan, siday ula dhaqmayaan shacabkooda, xidhiidhka ka dhexeeya iyaga iyo Wayaanaha, haduu dhib soo gaadho Wayaanaha siday noqonayaan iwm. Siduu Adoonka Guriga ee Malkom X uu tilmaamay uu isugu haysto inuu ka sareeyo Adoomada kale ayay kooxda Cabdi iley isugu haystaan inay ka sareeyaan shacabka intiisa kale, inkastoo uu gumaysiga wada xukumo. Sida uu master-ka ugu xidhay adoonkiisa guriga dhar wanaagsan, ayuu gumaysiga wayaanaha u siiyay kooxdan dhar, cunto, iyo awood aanay filaynin. Haddii arkaan qof ka soo horjeeda gumaysiga Itobiya, waxay ugu muuqani inuu u diidan yahay waxyaabaha uu siiyay gumaysiga (master). Sidaa uu adoonka Guriga (Home Negro) u difaacayao master-kiisa umabay kooxda Cabdi ileyna u difaacayaan gumaysiga oo uga dhigan master-kooda.
Waxaa kaloo jirta odhaah caan noqotay ah -Tuugiina maad aragtaan intaad kaanaga un arkaysaan -. Odhaahdan waxay ka mid tahay dhufayska ugu dambeeya ay galaan qaarkii doonaya inay difaacaan gacan-ku-dhiigle dambi ka galay umadiisa oo waliba ay ogyihiin in kooxda uu ka tirsan yahay ay iyaga qudhooda dhibaato u gaysteen. Qabyaaladda waa ibtilida 1aad ee haysata mujtamaca Somaliyeed gabi ahaantii iyadoo Itobiyana ay si xirfad leh u maalgaliso marwalba iyo meelwalba.
Su’aasha uu xubin walba oo ka mid ah halganka shacabka S.Ogadenya uu is-weydiiyo ayaa ah sideen uga samata baxinaa shacabka Somaaliyeed ee Ogadenya ee xoriyadiisa u halgamaya ibtilada qabyaalada ay Itobiya hawlgaliso? Waa su’aal joogta ah oo u baahan jawaab joogta ah, sababtoo ah isku dayga Itobiya inay adeegsato ibtiladan waa mid taagan marwalba iyo meelwalba. Waxaa intaa dheer Somalida oo ah shacabka kali ah ay ka suurtagasho inuu taageero ama difaacba qof dhibaato muuqata u gaysanaya nabadgalyada bulshada, oo tuug jidgooye ah ama dilaa gacan ku-dhiigle la yaqaano ah oon cidna bixinaynin, iyagana ku dhohoo.